Izindaba - Ungakuthuthukisa kanjani ukusebenza kahle kokukhiqiza ngokusebenzisa izinhlelo zesikhungo se-CNC
Ngo-CNC ngokunemba machining, ukuthi ungathuthukisa kanjani ukusebenza kahle kokukhiqiza ngokusebenzisa i-CNC machining center programme kuyinkambo edingekayo yabasebenza ngemishini. Izici ezithinta ukusebenza kahle kwe-CNC zibandakanya izinkinga zamathuluzi, izinkinga zokulungisa, imingcele yemishini, njll, futhi lezi zinto zithinta uhlelo lwe-CNC machining centre, ngaleyo ndlela luthinte ngokungaqondile ukusebenza komkhiqizo.
Okokuqala, ngaphambi kokuhlela esikhungweni se-CNC machining, kufanele sifunde ngokucophelela imidwebo yomkhiqizo, senze indlela yokucubungula umkhiqizo, futhi silungiselele amathuluzi afanele wokuchofoza. Ngaphansi kwesimo sokuqinisekisa ukunemba kwemishini, indawo yokuchofoza kufanele icutshungulwe ngasikhathi sinye ngangokunokwenzeka, ukuze kuncishiswe izikhathi zokucubungula kobuso bemishini. Kumele kubhekwe lapho kwenziwa uhlelo esikhungweni se-CNC machining.
1. Ekubekeni isikhathi esisodwa nokubopha, ukucubungula kufanele kuqedwe ngasikhathi sinye ngangokunokwenzeka, ukuze kuncishiswe izikhathi zokucubungula kokwenziwa komsebenzi, kunciphise isikhathi esisizayo futhi kunciphise izindleko zokukhiqiza;
2. Enkambisweni yokuhlela, naka ubuhlakani bokushintshwa kwethuluzi ukunciphisa isikhathi sokushintshwa kwethuluzi. Indawo ezocutshungulwa ngethuluzi elifanayo kufanele iqedwe ngasikhathi sinye ngangokunokwenzeka, ukuze kugwenywe ukuchitha isikhathi okubangelwa ukushintshwa kwamathuluzi njalo nokwenza ngcono ukusebenza kahle kokukhiqiza;
3. Ukuze unciphise isikhathi sokusebenza somshini futhi uthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza, kufanele kubhekwe esimisweni sokucutshungulwa kuqala kwezingxenye eziseduze ezinhlelweni;
4. Kuhlelo, kubhekwa indlela yokucubungula imisebenzi eminingi ndawonye, ​​ukucubungula imisebenzi eminingi ngasikhathi sinye kungasinciphisa ngempumelelo isikhathi sokuvala nokucindezela.
5. Enkambisweni yohlelo, kuyadingeka ukugwema ukuphindaphindwa kwemiyalo engavumelekile futhi uhambe ngokushesha ngaphansi kwesimo sokulayisha ukunciphisa isikhathi sokulinda.
Ngaphezu kwezici ezingenhla ezibangelwa ukusebenza kahle kohlelo lwe-machining centre, ubuchule bokulungiswa komkhiqizo kunganciphisa kakhulu isikhathi sokucubungula. Ngamafuphi, kunezici eziningi ezithinta ukusebenza kahle kwe-CNC machining. Ukunaka imininingwane kungathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokusebenza.